Early Marriage Interaction-SEED 2018 | Society for Environment Education Development
समाजमा वातावरणीय शिक्षाको विकास (सीड)
कार्यक्रमको नाम ः वालविवाह न्यनिकरणका लागि सरोकारवालाहरु संग अन्र्तकृया कार्यक्रम
कृयाकलाव नं. ः १.१०
जम्मा वजेट ः १४,७५०।० कार्यक्रम सम्पन्न मितिः २०७५।१२।०५
 शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तथा संवेगात्मकरुपमा पूर्ण विकास नहुँदै कानूनले तोकेभन्दा कम उमेरमा हुने विवाहलाई बालविवाह भनिन्छ । बालविवाह एक सामाजिक कुरिती र कानुनी अपराध हो । यसले बालअधिकार हनन हुनुका साथै बालबालिकाको विकासमा बाधा पुग्छ । बिश्व परिवेशमा १८ बर्ष मुनि हुने विवाहलाई बालविवाह भनिन्छ । नेपालमा भने बीस बर्ष नपुगी विवाह गर्न नहुने कानूनी प्रावधान छ ।
 नेपालको संबिधान २०७२ को धारा ३९ मा बालबालिकाको हकको व्यवस्था गरिएको छ । यसका १० वटा उपधारामा बालबालिका सम्बन्धी बिभिन्न अधिकार संरक्षण गरिएको छ ।
 जसमध्ये बालविवाह सम्बन्धी प्रावधान पनि समेटिएको छ । उपधारा (५) मा कुनै पनि बालबालिकालाई बाल विवाह, गैरकानूनी ओसारपसार र अपहरण गर्न वा बन्धक राख्न पाइने छैन भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
 उपधारा (१०) मा उपधारा (५) विपरीतको कार्य कानून बमोजिम दण्डनीय हुने र त्यस्तो कार्यबाट पीडित बालबालिकालाई पीडकबाट कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने प्रावधान राखिएको छ ।
 (१) विवाह गर्ने व्यक्तिको उमेर बीस वर्ष नपुगी कसैले विवाह गर्न वा गराउन हुँदैन ।
 (२) उपदफा (१) विपरीत भएको विवाह स्वतः बदर हुनेछ ।
 (३) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ ।
 (१) विवाह गर्ने व्यक्तिहरुको मञ्जुरी विना कसैले कसैलाई विवाह गर्न वा गराउन हुँदैन ।
 (२) उपदफा (१) बमोजिम मञ्जुरी विना भएको विवाह बदर हुनेछ ।
 (३) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलार्ई दुई वर्षसम्म कैद र बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिमाना हुनेछ ।
 स्पष्टीकरण ः यस दफाको प्रयोजनका लागि दफा १७३ बमोजिम विवाह गर्न पूरा हुनुपर्ने उमेर पूरा नभएको व्यक्तिले दिएको मञ्जुरीलाई मञ्जुरी मानिने छैन ।
 दफामा ७०. विवाह हुन सक्ने ः
 (१) यस परिच्छेदको अधीनमा रही देहायका अवस्थामा पुरुष र महिला बीच विवाह हुन सक्नेछ ।
 (क) पुरुष र महिलाले एक अर्कालाई पति पत्नीको रूपमा स्वीकार गर्न मञ्जुर गरेमा,
 (ख) कानून बमोजिम पुरुष र महिला हाडनाता करणीमा सजाय हुने नाताको नभएमा,
 (ग) पुरुष र महिला दुवैको वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्था नरहेमा,
 (घ) बीस वर्ष उमेर पूरा भएमा ।
 बालविवाह परिवार, समाज र राष्ट्रका लागि निकै ठूलो समस्या बन्दै गएको छ । अधिकांश परिवारले आफ्ना सन्तानमा देखेको भबिस्य बालविवाहका कारण चकनाचुर भएका छन् ।
 बालविवाहपछि शिक्षा अलपत्र पर्दा अभिभावक र बालबालिकाको सपना अधुरा भएका छन् । बालबालिकाको जीवन पनि वर्वाद् भएको छ ।
 बालबालिकालाई विवाह हुनबाट बचाउन तीनै तहका सरकारले बालविवाह सम्बन्धी नीति नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै गाउँसमाजमा चेतनामुलक अभियानहरु सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
 बालबालिकाहरुलाई बालविवाहबिरुद्ध सशक्तरुपमा बोल्नसक्ने बनाएर बालविवाह न्यूनिकरण अभियानमा सहभागी गराउनुपर्छ ।
 बालविवाहले बालबालिकाको जीवन, परिवार र समाजमा पारेको गम्भिर प्रभावको समिक्षा गरी बालबालिकालाई बालविवाहबाट बचाउन आबश्यक प्रभावकारी कदमहरु चालिनुपर्छ ।
 यो सामाजिक कुरिती र कुसंस्कारको अन्त्य गरी बालबालिकालाई थप जोखिमबाट बचाउन आबश्यक छ ।
 बालविवाहबाट बालकभन्दा बालिका बढी प्रभावित भएको देखिएकोले उनीहरुको सशक्तिकरणमा जोड दिनुपर्छ ।
 बालविवाहलाई कहिलेकाहींको छलफलको बिषय मात्र नठानी यसलाई न्यूनिकरण गर्न नियमित सशक्त अभियानहरु सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
 हरेक बालबालिका, परिवार र समुदायसम्म सन्देश पुग्ने गरी सचेतना अभियान थाल्नुपर्छ ।
 समाजका हरेक सचेत बर्ग, सामाजिक र सामुदायिक समूह, संघ संस्थाहरु पनि यस अभियानमा नियमिमत सामेल भएमा बालविवाहमुक्त समाज निर्माण गर्न सकिन्छ ।
 बालविवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति २०७२ लाई संघीय संरचना अनुसार परिमार्जन गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ ।
समाजमा वातारणीय शिक्षाको बिकास ( सीड)ले गाउँपालिका परियोजना सुझाब समिति गठन गरेको छ । आईतबार तुलसीपुरमा कार्यक्रम गरी शान्तिनगर र दंगीशरण गाउँपालिकास्तरीय सुझाब समिति गठन…
SEED in cooperation with its development partners (I'm Swedish Development Partner and DKA, Austria) recently conducted school monitoring program in the Dangisaran Rural Municipality in…